Maamulka gobolka Banaadir ayaa sheegay in uu furan yahay suuqa Bacadlaha ee dagmada X/weyne – idalenews.com
Kadib kulan ay maanta isugu yimaadeen gudiyo isugu jira ganacsato iyo hay’adda maamusha suuqa Bacadlaha ee magaalada Muqdisho iyo maamulka gobolka Banaadir ayaa lagu shaaciyay in uu furan yahay Suuqa Weyn Bacadlaha ee dagmada X/weyne.
Kulankani oo ay isugu yimaadeen masuuliyiin kala matalayay Ganacsatada, Gudiga maamula suuqa Bacadlaha iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa waxaa gudoomiyaha gobolka Banaadir ahan duqa magaalada Muqdisho Maxamuud Axmed Nuur “Tarsan” uu sheegay in suuqa Bacadlaha uu furan yahay isla markaana looga baahan yahay ganacsatada in ay ka digtoonaadaan in dukaamada Suuqa ay isaga xirmaan sabab la’aan.
Suldaan Subeyr iyo Cumar Ringo oo u hadlayay gudiyada ganacsatada iyo hay’adda Maamusha Suuqa Bacadlaha ayaa waxaa ay sheegeen in dedaal dheer iyo howl adag kadib ay maanta ku faraxsan yihiin in loo furo suuqa Bacadlaha.
Dhanka kale guddoomiyaha gobolka Banaadir ayaa maanta xariga ka jaray beer ama Jardiin loogu magacdaray beerta Nabadda oo ku taala dagmada Waaberi taas oo ay dhismaheeda suura galiyeen ciidamada AMISOM.
Guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Maxamuud Axmed Nuur Tarsan oo hadal ka jeediyay daahfurka Beerta Nabadda oo loogu talagalay in ay ku nastaan shacabka Soomaaliyeed ayaa sheegay in mashruucan uu ku beegmay xili ciidamada AMISOM gaar ahaan kuwa ka socda dowladda Burundi ay ugu talagaleen in ay dhaxgalaan shacabka isla markaana ay taaba galiyaan howlaha beni’aadannimo sida biyo siinta, dawo qeybinta iyo howlo kale.